Igwefoto Igwe Na-eyighị Ka Ọ Bụghị Mkpebi Ikpeazụ - OMG Solutions
Igwefoto-yi ornbụ nwoke nwere ike ọ gaghị abụ ikpe ikpe ikpeazụ
Echiche a na-ewuli na ozugbo ejiri igwefoto ọ bụla nwee kamera, a ga-ewepụ esemokwu ahụ site na ịgbapụ ndị uwe ojii na ojiji ndị ọzọ maka ike n'ihi na "ihe mere n'ezie" ga-enwetara na vidiyo maka mmadụ niile. Igwefoto ahụ bụ ihe dị mkpa eji arụ ọrụ ọhụụ. Mana ngalaba uwe ojii ka kwesịrị imekwu ihe iji melite nghọta na ịza ajụjụ.
Obi abụọ adịghị ya na igwefoto ahụ dịka igwe egbe, igwe onyonyo ekwentị, yana igwe onyunyo nwere ike ịnye echiche pụrụ iche banyere ndị uweojii na-ezute ma, n'ọtụtụ oge, enwere ike inyere ndị ọrụ uwe ojii aka. Mana dị ka ngwaọrụ ndị ọzọ, igwefoto etinyere n’elu yi n’elu gị ma ọ bụ n’isi gị nwere ihe ga-enyere gị aka ịghọta ma chebara gị echiche mgbe ị na-atụle ihe onyonyo ndị ahụ.
Igwefoto anaghị eso anya gị ma ọ bụ na-ahụ ka ha na-ahụ
Igwefoto anaghị eso anya onye na-ebu ihe dịka ihe ahụ mere na ọkwa nke ugbu a, igwefoto ahụ abụghị onye na-ahụ maka anya. Ngwaọrụ ahụ dị mgbagwoju anya nwere ike iso mmegharị anya gị ma lekwasị anya na obere obere okirikiri vidiyo na-acha uhie uhie nke na-aka akara ebe ị na-achọ site n'otu microsecond gaa na nke ọzọ.
Igwefoto ahu na-ese foto sara mbara ma o nweghi ike idebanye ebe n’ime ihe a ị na-elele ozugbo. Ọ bụrụ n ’i lepụ anya n’ebe igwefoto dị na-elekwasị anya, ị nwere ike ghara ịhụ mmeme n’etiti igwefoto ahụ na-egosi na ọ na - eme‘ n’ihu gị n’anya. ’ Enwere ike inwe nnukwu nbupu n'etiti echiche gi na igwefoto. E mesịa, onye na-enyocha ihe na-eme na igwefoto ma na-ekpe ikpe ihe ị na-eme nwere ike inwe nnukwu echiche dị ukwuu banyere ihe mere mgbe ahụ ị nwere n'oge ọ na-eme.
Gba igwefoto dị iche na ọsọ nke ndụ
Ebe ọ bụ na kamera ahụ na-edekọ na ọsọ ọsọ dị elu karịa ụlọ ahịa dị mma ma ọ bụ igwefoto nchekwa nchekwa, ọ ga-abụ na nkọwa dị mkpa ga-efu na oghere millisecond n'etiti etiti, dị ka ụfọdụ na-eme na ngwaọrụ ndị ahụ. Ndị mmadụ na-aghọtaghị usoro mmeghachi omume agaghị etinye ya na mgbe ị na-elele eserese. Ha ga-eche na onye uweojii na-agbaso ọsọ ọsọ nke ihe ahụ dị ka igwefoto na-edekọ ya. Yabụ, na-enweghị ntinye ihe ọmụma, ha agaghị enwe ike ịghọta etu onye ọrụ uwe ojii ga-esi kwụsị n'amaghị ama itinye ọdụ na azụ onye a na-enyo enyo ma ọ bụ gbaa mgbọ ndị ọzọ mgbe iyi egwu kwụsịrị.
Igwefoto nwere ike ịhụ ka dị mma karịa ka ị na-ahụ n’ọkụ dị ala
Igwefoto di elu nke igwefoto ahu na-enye ha ohere ka ha dee ya na o doo anya na otutu ihe di ala. Mgbe a nyochachara ihe nkiri n'ụkwụ mgbe emesịrị, ọ ga - ekwe omume ihu ihe ndị merenụ ka ọ dị nkọ karịa ka ị nwere ike ime n'oge ahụ igwefoto n'ọrụ. N’aka nke ozo, igwefoto adighi adi nma na ntughari nke oku. Na-aga na mberede site n'inwu enwu gaa n'ihu ma ọ bụ nke ọzọ, igwefoto nwere ike wepu onyinyo niile obere oge.
Ahụ gị nwere ike igbochi echiche ahụ
Ego ole otu igwefoto na-ese na-adabere n'ebe ọ nọ na ebe ihe a na-eme. Dabere na ọnọdụ na nkuku, enwere ike igbochi foto site na akụkụ ahụ gị, site na imi gị n'aka gị. Igwefoto enweghi ike ijide onyonyo 360 nke ọnọdụ nwere ike ịpụta. Ihe a enweghị ike inye anyị ezigbo eserese banyere ihe ahụ merenụ. Ọ bụrụ na ị na-agba egbe ma ọ bụ Taser, dịka ọmụmaatụ, igwefoto dị n'obi gị nwere ike ọ gaghị edekọ ihe karịrị ogwe aka gị na aka gị. Ma ọ bụ nanị ịghachi ọnọdụ gị nwere ike ime ka igwefoto ghara ile anya. Oge dị oke egwu n'ime ọnọdụ ị nwere ike ịhụ nwere ike ọ gaghị efu kpamkpam site na igwe gị n'ihi mgbanwe ndị a, na-echekwa ihe onye nyocha nwere ike ịchọ ịhụ iji mee mkpebi ziri ezi.
Igwefoto na-edekọ naanị na 2-D
Maka igwefoto anaghị ede ihe omimi nke atọ ahụ mmadụ hụrụ n'anya na-ekpebi ịdị anya nke ihe ha chọrọ nwere ike isi ike. Dabere na oghere a metụtara, igwefoto nwere ike mpikota onu di anya n'etiti ihe ma obu mee ka ha puta nso karie ka ha dị n’ezie, na-enweghị ezigbo echiche nke anya onye na-enyocha nwere ike ịkọwa ọkwa nke ihe onye uwe ojii chere ihu. Enwere ụzọ ọrụ maka ịchọpụta ebe dị anya na ndekọ 2-D mana ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta anaghị amata ma ọ bụ nweta ha.
Otu igwefoto nwere ike ọgaghị ezu
Ka ị na -ekwukwu kamera ebe ahụ na-edekọ ihe omume ike, ka enwere ohere karịa enwere ike ịkọwapụta ihe edoghị anya. Ngwurugwu, ọkụ gburugburu, na ihe ndị ọzọ ga - agbanwecha iche n'echiche otu onye uweojii na nke onye ọzọ, ma jikọta ihe eji esepụta ihe ga - enye ozi sara mbara maka ịghọta ihe merenụ. Ihe yiri oke arụ site n'otu akụkụ nwere ike dị ka ihe ziri ezi na nke ọzọ.
Chee echiche nyocha nke egwuregwu n’egwuregwu bọọlụ. N’imezi mkpebi ịkpọ oku, ndị ọka ikpe chọrọ ilele ihe a anya site n’aka ọtụtụ igwe onyonyo ka o kwere mee iji ghọta nke ọma ihe ha na-ahụ. Kwesịrị, ndị uwe ojii kwesịrị ịtụle otu echiche ahụ. Nsogbu a bụ na ọtụtụ oge enwere igwefoto naanị so na ya, ma e jiri ya tụnyere iri na abuo nke enwere ike ịgụta ya na egwuregwu egwuregwu, na nke ahụ, a ghaghi iburu ihe mgbochi ahụ n'uche.
Igwefoto enweghị ike dochie nyocha nke ọma
Mgbe ndị ọrụ uwe ojii megidere itinye kamera, ndị nkịtị na-eche mgbe ụfọdụ na ha na-atụ egwu “nghọta.” Ma ọtụtụ mgbe, ha na-enwe nchegbu na a ga-enye ihe ndekọ igwefoto enweghị isi, ma ọ bụrụ na enweghị ya oke, ikpebi ihe ha mere. Edekọrịgoro eserese igwefoto naanị dịka nke Eziokwu banyere ihe na-akpata esemokwu. Ọ dị mkpa ịnwale ya ma gbaa akaebe megide akaebe ịgba akaebe, okwu banyere ya, nkwupụta onye uweojii metụtara, yana ihe ndị ọzọ gbasara nyocha zuru oke, nke anaghị ele mmadụ anya n’ihu na-eleba anya n’ihe gbasara mmadụ. Okwesiri ighota oke na ihe ndi ozo kwesiri ighota ha nke oma ma ghakwaa hu na a gaghi egosi ha dika ndi anwansị anwansi site na ndi n’adighi aghota ihe gha eme.
Ndị ọrụ ọrụ anaghị atụgharị igwefoto "gbanye"
Nnyocha nke Ngalaba Ndị uwe ojii New Orleans hụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe omume 100 ebe ndị uwe ojii jiri ike ma na-eyi igwefoto ahụ mana ha anaghị etinye ya.
N’ọnwa Septemba gara aga, ndị uwe ojii Ver Ver abụọ gbagburu otu nwoke mgbe ha na-ese kamera. Ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ndị ọrụ tụgharịrị tupu agbapụ; e wepụrụ ha abụọ maka mmebi iwu ha niile.
Tupu chifuo ezé nwanyị, Daybọchị Daytona Beach, Florida, ndị ọrụ gbanyụrụ kamera ahụ ha.
Na Septemba, ndị uwe ojii nọ na Washington, DC gbagburu Terrence Sterling, nwoke isi ojii 31 na-enweghị ngwa agha, mgbe ọgba tum tum ya tọgbọrọ n'ime ụgbọ ala ha. Kama imegide iwu District, ọ nweghị otu n'ime ndị ọrụ uwe ojii ahụ mere ihe igwefoto ha ruo mgbe agbapụchara. Ihe nkiri obodo a wepụtara na-ejide oge ikpeazụ Sterling, mana vidiyo ahụ na-amalite ihe karịrị otu nkeji mgbe agbachara agba. Ndị ụlọ ọrụ US Attorney's na-enyocha okwu a. Ugbu a, a chọrọ ka ndị ọrụ DC jiri nkwenye kwenye na ha agbanyere igwefoto ahụ ha mgbe ha na-aza oku ma ọ bụ soro ndị ọha na-emekọrịta ihe.
Onye Na-ere Teknụzụ Igwe Ahụ Akpụkpọ Ahụ
Ọtụtụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii na-eji igwefoto uwe ndị Axon mere (nke bụbu Taser), nke na-enye kamera na-ere ere ma na-ere ọrụ nchekwa data. Ndị ọzọ na-ere ahịa gụnyere Aventura, Black Mamba, BrickHouse Security, Brimtek, COBAN, Data911, DEI, Digital Ally, FlyWIRE, Global Justice, GoPro, HauteSpot, HD Protech, Kustom Signals, L-3 Mobile-Vision, Iwu Sistem, Ọkachamara Marantz, Martel, Motorola, Panasonic, Patrol Anya, Paul Conway, Pinnacle, PRG, Primal USA, Utility Inc., PRO-VISION, Reveal Media, Invenations nke nchekwa, Ọhụụ nchekwa, Titan, Utility, VIEVU, VP360, WatchGuard, WOLFCOM, Zepcam, na Zetronix.
Na mgbakwunye na iresị igwefoto ahụ, ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enyekwa nchekwa data maka ihe nkiri. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eweta igwefoto ahụ na-eweta ihe mkpuchi OMG na-enye nchekwa nke ime na kaadị SD, ma nwee ụlọ ọrụ ahụ http://omg-solutions.com/ .
Ndị uwe ojii Sacramento gburu Stephon Clark, nwoke Africa bụ onye America n’azụ ụlọ nne nne ya, ndị mmadụ na-eme ngagharị iwe megide ihe ndị uwe ojii mere. Ndị uwe ojii kwuru na ha chere na Clark jikere. Mana mgbe agbapụchara, ndị ọrụ uwe ahụ ahụghị ngwa ọgụ na Clark, naanị iPhone. Onye isi ndị uwe ojii obodo ahụ na-aza ngwa ngwa maka ngagharị iwe ahụ site n'inye ihe ngosi kamera na mbo iji nyere ọha na eze aka, n’amaghị ama ihe mere n'ezie. Ma eserese enweghị ike idozi okwu ahụ.
Iwe dị ukwuu banyere ihe ngosi dị elu na mgbanwe echiche ọha na eze emeela ka ngalaba ndị uwe ojii gburugburu ụwa nwee ike ịkwadebe ndị uwe ojii na kamera ma tinye ọzụzụ mgbazinye. Mana onweghị ndị omebe iwu mpaghara, steeti ma ọ bụ nke gọọmentị machibidoro ndị uwe ojii iji ike egbu egbu na-enweghị isi. Kama nke ahụ, ndị omebe iwu nke ọkwa niile ka na-enye ndị uwe ojii ohere kachasị ohere iji ike na-egbu egbu nke iwu obodo nyere ikike. N'ezie, iji ya atụnyere ndị uwe ojii na-egosi na enweghị ike a karịrị akarị iji chebe ndị uwe ojii n'ọnụ ọnụ ndị nkịtị nwụrụ.
Anon., Nd EFF. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.eff.org/pages/body-worn-cameras
[Enweta October 18, 2017].
Anon., Sep 23, 2014. Force Science Institute. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.policeone.com/police-products/body-cameras/articles/10-limitations-of-body-cams-you-need-to-know-for-your-protection-Y0Lhpm3vlPTsJ9OZ/
Hardy S, BLRPCSWPP-HS, 2017. Ahụike uche na Medicine ezinụlọ. [Na ntanetị]
E Nwere na: http://www.mhfmjournal.com/old/open-access/the-feasibility-of-using-body-worn-cameras-in-an-inpatient-mental-health-setting.pdf
Ketchell, M., Jenụwarị 18, 2016. Okwu. [Na ntanetị]
E Nwere na: http://theconversation.com/u-s-laws-protect-police-while-endangering-civilians-52737
PASTERNACK, A., nd CCOMPANY FAST. [Na ntanetị]
E Nwere na: https://www.fastcompany.com/3062837/it-fell-off-body-camera-problems
Nzuzo 6925 2 Echiche Taa